China Private Label False Eyelash Packaging Box Wholesale 25mm 100% Mink Eyelashes ifektri abakhiqizi | Weiti
Ilebula Elizimele Lama-Eyelash Packaging Box Wholesale 25mm 100% Mink Eyelashes
Imivimbo engu-1, 25mm ende e-fluffy mink fur
2, I-curl ephelele ukuze ivumelane nemivimbo engu yakho
3, Kulula futhi kukhululekile ukusebenzisa
4, logo yangasese yangokwezifiso
Ukukhazimula kwamaKalocils kushaywa:
Umbala uyakhanya, ubushelelezi, awufiphele, okuyisici se-eyelashes yamanga esezingeni eliphakeme.
Izinto ezilukhuni zizocindezela kakhulu amajwabu amehlo, futhi ngemuva kokuzigqoka, kubukeka kungamanga futhi kungokwemvelo. Uma i-eyelashes yamanga ithambile kakhulu, ayimile ngokwanele, futhi i-curl izoba ngaphansi. Okufanele kakhulu ukuthi ithambile futhi inzima kancane kunezinkophe zakho zangempela.
Ama-eyelashes amahle angavela ngokwemvelo, afana nejika lokukhula le-eyelashes ephezulu. Ama-eyelashes amanga aqondile azozizwa eqinile lapho egqokwa, futhi ngeke kube khona ubuhle.
Ama-eyelashes angamanga abalulekile ekufezeni ubuhle. Kungaba ukwenziwa kwansuku zonke noma ukubamba iqhaza emicimbini eyahlukahlukene yokudansa, ama-eyelashes amahle azodonsela ukunaka kwabantu futhi azenze uzethembe ngokwengeziwe.
Izitayela ezahlukahlukene ze-eyelash zingahlinzekwa ngobuningi kusuka esitokisini futhi zisekele nokwenza ngokwezifiso, ukuze ube nezinkophe zakho eziyizintandokazi zamanga nganoma yisiphi isikhathi. Njengomkhiqizi we-eyelash wamanga, bekulokhu kuyinjongo yethu ukuthuthukisa ngokuqhubekayo izitayela ezishisayo nezithandwayo ze-eyelash.
Izinhlobo ezahlukahlukene zamabhokisi okupakisha ama-eyelash angenziwa ngezifiso, futhi ilogo yakho yangasese ingenziwa ngezifiso Konke okudingeka ukwenze ukusithumela noma ukusitshela umbono wakho we-logo oyifunayo. Ithimba lethu lokuklama elinamakhono lizokunikeza isiphakamiso esihle kakhulu. Sinikela ngama-logo wamahhala nezinsizakalo zokwakha zokupakisha. Uma udinga izithombe zomkhiqizo, isithombe esithathiwe singenziwa yithi.
Gcina imivimbo yakho ebhokisini lokugcina abafike kulo ukuze lihlale lihlanzekile, lomile futhi livikelekile ekulimaleni.
Uma imivimbo yakho iqukethe phezu kwayo, UNGAYITHUTHI IMANZI, lokhu kuzobalimaza. Ukuze uhlanze noma yikuphi ukwakheka, gcoba imivimbo yakho ngobumnene nge-mascara ehlanzekile. Ungase futhi ususe ngokucophelela iglue elisele ebhanini lokuqhuma ngezimpintshi. Sicela UNGALOKOTHI uthole imivimbo yakho imanzi.
Lapho unakekelwa kahle imivimbo yakho iyaphinda isebenze ngezikhathi ezingama-20-30
ICEBISO: Ukwandisa impilo ende nokugcina isitayela sokuqala semivimbo yakho ngisho nangaphezulu, ungasebenzisi i-mascara ngqo kubo. Esikhundleni salokho, sebenzisa i-mascara kwimivimbo yakho yemvelo kuqala, ivumele ukuthi yome, bese usebenzisa imivimbo yakho.
Langaphambilini Enza ngendlela oyifisayo ilebula langasese lomuntu ngamunye we-Faux Mink Eyelash Extensions
Olandelayo: Kwenziwe ngentando Amalebula Amalebula Aseceleni I-Wholesale Fluffy 25mm Mink Eyelashes
I-25mm Lashes Strip
Imivimbo engu-25mm Mink Strip
I-3d Mink Strip Lashes
Ama-Eyelashes Amanga Fluffy
imivimbo yelebula yangasese
Bulk Intengo eshibhile Label Strip Private Lashes 25m ...
Isitolo esidayisa yonke impahla ngokwezifiso Ilogo Eyelash Packaging Box 25m ...
China Eyelash Factory OEM ODM Unya Isitolo esidayisa yonke impahla ...
Custom Eyelash Packaging Soft Thick Handmade 25 ...
i-eye liner, ezambiwa, Ukuqhuma Kwamehlo, imivimbo ye-mink, Izandiso ze-Eyelash, Abadayisi bezinkophe,